Njem nke oru ichu nta | Ọrụ - Ọrụ - Antony Raj Jayamani na Dubai
Njem nke oru ichu nta - Were anya n'okpuru otu akụkụ!
Ugbu a laghachiri isi ihe mere m ji bịa, nchụso ọrụ. Na izu abụọ m ghọtara na ọnọdụ ahụ abụghị nke e kwere nkwa, aghaghị m ịchọ ọrụ ahụ mgbe m bi ebe ahụ. Ọ bụụrụ m ihe ijuanya ma enweghi ike ịgụta eziokwu ahụ. Mgbe izu abụọ gasịrị, enwere m anya ịchọta ihe n'oge na-adịghị anya, achọrọ m ịkọrọ ndị agha m amara ozugbo. Achọghị m ịbụrụ ha ibu arọ ọ bụ ezie na ha emeghị ka ọ dị m ka ọ dị, enweghị m ahụ iru ala. Ha na-ekesa CV m na netwọk mmekọrịta ha na ndị ọkachamara ha, ha mere ndokwa ụfọdụ akwụkwọ akụkọ site na ebe m ga-enyocha ọrụ kwesịrị ekwesị maka m nke dabara na profaịlụ m. Ọ bụ naanị mmalite.
Uzo nke ichu nta oru choro uzo nkwurita okwu, n'ihi nke a ka ndi agha m zutara m netwọk netwọk, otu ulo oru ohuru ulo oru n'oge ahu bu DU. Ka m na-eleta visa, ya mere, ọ gaara esiri m ike ịzụta sim. Ọ bụrụ na m ahọrọ netwọk m gaara aga Etisalat. Dị ka Etisalat bụ naanị netwọk dị na nke ahụ, nke guzobere netwọk ya na Middle East. Ma ndị agha m họọrọ DU maka m, ọ na-ekpuchikwa mkpa m nile nke nkwurịta okwu. Ya mere ọ dị mma maka m.
N'oge ahụ enwere m ahụmịhe ọrụ maka nanị njem azụmahịa, ya mere, m na-elekwasị anya bụ inweta ọrụ n'otu ubi ahụ. Ebe m chebere bụ Abu Dhabi ka m na-ebi n'ebe ahụ. Dị ka UAE bụ obodo kachasị nleta na njem nlegharị anya na-abụ mgbe niile n'ogologo ya ka m wee nwee ike inweta ọrụ ahụ. N'ihi nke a, agara m Malls, Suqs azụmahịa ebe ebe a na-elekọta ndị ọrụ ụlọ ọrụ. M kesara m CV dị ka broshuọ ma ọ bụ akwụkwọ. Ọ bụ ihe isi ike na ihe nhụsianya maka m ma ọ bụrụ na m tinye maka akaụntụ ọrụ na njem njem nke m nwere ahụmahụ, a jụrụ m banyere qualification kwesịrị ekwesị nke m na-enweghị na ahịa ebe iru eru abụghị ihe ma ahụmahụ ahụ bụ ajụjụ, nke m enweghị J. Na agbanyeghị, ọ na-azakarị m ngwa ngwa.
Mgbe m nwetasịrị azụ ná mgbalị mbụ m, m gbanwere usoro m, gbasaa mgbatị m ma na-achọ ọrụ n'ọhịa ndị ọzọ karịa ahia njem. Ọrụ ọzọ na-eme nke ọma bụ nke ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe, nke na-arụkọ ọtụtụ edemede. Njem, mgbanwe ego na ezigbo ala bụ ụlọ ahịa ha. M gbalịrị m ọchị ma ọ dị mwute ikwu na ọ bụ otu ihe ahụ.
M na-enwe nkụda mmụọ kwa ụbọchị, ọ dịghị ihe na-eme dị ka m chere. M na-aga kwa ụbọchị na cafụfụ ịntanetị iji tinye akwụkwọ n'Ịntanet, na-ezigara CV m akwụkwọ, iji chọpụta ọnọdụ ọhụrụ. Agara m Danata, ụlọ ọrụ Emirates dị na Abu Dhabi na-atụ anya inweta nzaghachi dị mma. N'ikpo ọkụ nke Abu Dhabi m na-aga n'okporo ụzọ. Echefuola m ihe kpatara ya ugbu a ma mara nzube ahụ, nke ga-abụ akụkụ nke ọha mmadụ a dị egwu.
M gbasaa radius m chọtara site na Abu Dhabi ruo ala ndị ọzọ nke UAE m gara Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaima na Dubai. Achọpụtara m, ma e wezụga Abu Dhabi, Dubai na Sharjah ohere inweta ọrụ na mpaghara ndị ọzọ dị njọ. N'ihi ya, m lekwasịrị anya na 3 na-ekwu, Abu Dhabi nọgidere bụrụ ihe kacha mkpa. Ugbu a mgbe m na-agbagha azụ, aghọtara m na emeela m ihe pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ndụ m na Lahore, Pakistan. Enwere m ihere na ọ naghị adịrị m mfe ịga obodo. Ma na UAE m na-agagharị dị ka nwa amaala. M na-aga naanị site n'otu steeti na ndị ọzọ na-achọ ọrụ. Ọ bụ oge ndụ m maka m.
Ịgagharị n'okporo ụzọ nke UA Ọ dịghị mgbe ọ dị ka ike gwụrụ, ebe ụlọ na ọdịbendị ndị na-atụ egwu na-emetụ m aka na njem m nile. Achọrọ m ịnụ ụtọ oge ọ bụla ma ọ bụ n'echiche nke egwu ka m na-atụgharị na azụ m ka mbọ m na-eme ghara ịmị mkpụrụ. Oge na ego funahụrụ m. Enwere m ndụ biri na Pakistan na nrọ m. Achọrọ m ịbụ akụkụ nke otu mba dị iche iche site na ebe m na-amụta ụkpụrụ ọma nke omenala ndị ọzọ ma mezuo na ndụ m.
Ihe omumu m enweghi ihe obula na UAE. Olileanya m niile na-agba m n'ihu.
Dị ka a na-ekwu na mmiri na-eri mmiri na-ejide ahịhịa, agara m ụlọ ọrụ logs site na ndị agha m. Onye a gwara m bụ onye njikwa na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ Pakistani nakwa onye ya na ndị ikwu ya kwagara na UAE na 1980s. Ha gbabara na UAE iji zere osobo nke onye isi Zia agha n'oge ahụ.
Ugbu a laghachi na ụlọ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ na azụmahịa cranes. Na-enye cranes na saịtị nwube. Ọ bụ ọrụ na-enye ọganihu dịka ihe eji eme ka ọ kwụsịtụ na UAE m zutere onye ahụ dị nwayọọ. O nyere m ọrụ na akaụntụ ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ. ọfịs ya nọ na Dubai, otu n'ime nnukwu ụlọ elu nke elu ya adịghị ahụ anya ọbụna ma ọ bụrụ na m gbanwee isi m gaa na 90 nrịgo elu. N'ụlọ ụlọ elu ahụ nwere ụlọ obibi 4 dịka ụlọ ọrụ ya. N'ebe ahụ, ezutere m Beloch (ógbè Pakistan) oge mbụ na ndụ m. Ọ bụ onye dị ebube. Ọ nabatara m aka abụọ. Echiche nile nke ezi uche m nụrụ banyere Baloch dị nnọọ ka ọ na-apụ. O nwere ike ịbụ onye ahụ na-achịkwa omenala UAE. Nke a bụ kpọmkwem m nwetara n'okporo ụzọ na n'okporo ámá UAE & ọzọ n'ọfịs na ndụ ọkachamara. Ọ dị ka onye nkụzi m. Ọ kụziiri m ngwanrọ nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịbụ Peachtree, anaghị m echeta ya ugbu a. Ọ bụ ezigbo ahụmahụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ bụ ndị Pakistanis bụ ndị India ụfọdụ na ndị Phillipinos. Ekwesịrị m ịkọwa mba ndị UAE na-ahọrọ Phillipinos dị ka nwa odibo maka ụlọ ha n'oge ahụ. Enweghị m echiche ọ ga-abụ na ha bụ ndị a tụkwasịrị obi ma ọ bụ ọrụ ego, n'ezie enweghị echiche.
Ọ bụ ụbọchị 4 m nwere na ọfịs ahụ. A na-enye m AED 2,500 kwa ọnwa site na nke ha ga-ewepụta AED 200 kwa ọnwa dị ka ụgwọ maka visa. Ezigbo ụlọ ọrụ na-enye ụlọ na njem si n'ụlọ gaa n'ọfịs na azụ. Enwere m obi iru ala na nke a, n'ihi na ọ bụghị dị ka m tụrụ anya ya. Oge ọrụ na-amalite site na 7 ruo 7 elekere na 2 awa ụbọchị ezumike nke a ga-eji n'ọrụ, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme n'oge okpomọkụ n'etiti ehihie.
Maka visa ha na-atụ aro m ka m wepụ stampụ si na mbata nabatara na mpaghara Keesh ma banye na afọ 2 maka akwụkwọ ọrụ, a sịrị na ọ bụ omume nkịtị. Ezinụlọ bụ ebe obibi studio na Sharjah nke mmadụ 12 keere, naanị 2 ime ụlọ ịwụ ahụ dị. E nweghị nzuzo ọ bụla. A na-ahazi njem ụgbọ mmiri ịhapụ ọrụ na 6 ka m wee jide van anyị ga-adị njikere tupu 6 maka na anyị ga-ejikwa ma malite maka ụbọchị 5. Ebu ụzọ nweta iwu mbụ na-achịkwa maka iji ụlọ ịsa ahụ mee ihe. Ọrụ a na-agba ọkụ na-ewute m na ọ bụrụ na onyinye ahụ enyeghị m iwe, mere ka m chee ma ọ bụ ịchọta ma ọ bụ laghachi Pakistan.
Ọnọdụ ahụ enweghị m afọ ojuju. Na 6 mgbe anyị na-apụ maka ọrụ, ọ na-ewe oge 45 ka anyị ruo. Ọ bụ nanị akwa mmiri nke anyị ga-agafe na Dubai si Sharjah. N'ihi ụlọ ọrụ kachasị elu nke ọ na-eji na-eme ka ọ bụrụ ihe na-egbuke egbuke kwa ụbọchị. Ugbu a ka m na-enweghị afọ ojuju ọ bụla egwu m na-enweta bụ ọjọọ. Ezigbo echiche banyere UAE kwusiri. E nwere mgbe ụfọdụ ibu arọ anyị ga-ebu tupu ị gaa nke ọma. Echere m na m erubeghị oke ịghọta nke a. Na agbanyeghị n'ụbọchị Thursday nke bụ ụbọchị ọrụ izu ikpeazụ nke izu m chọrọ ka mụ na ndị agha m nọrọ izu ụka na Abu Dhabi.
Azu m na Abu Dhabi m na-atụle ọnọdụ mụ na ndị agha m na ezinụlọ m na Pakistan. Ndị ọbịa maara na nke a mere ha na-atụ aro ka m buru ya ruo oge ụfọdụ, ihe ga-aka mma. Dị ka ahụmahụ m n'oge gara aga na ha banyere ọrụ ahụ m na-achọ ịṅa ha ntị, ezinụlọ m laghachi na Pakistan kwadoro mkpebi m ịlaghachi. Achọrọ m ịchọ ọrụ mgbe m lọtara, m dị njikere iji ihe ize ndụ a n'ihi na m maara na ezinụlọ m nọ n'azụ m. Nanị ihe dị oké egwu ma dị mkpa nke ndụ na Pakistan na Dubai bụ ezinụlọ. Onye kwuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị ga-aga ogologo oge gaa otu. UAE bụ njem ogologo m. Enweghị m njikere. Ekpebiri m ịlaghachi.
Ka oge na-aga, mgbe otu afọ gasịrị, anụrụ m ụlọ ọrụ ahụ nke enyere m ọrụ ka emechiere ya ka mkpebi nke ịkwụsị onyinye ahụ kwadoro. Na aku na uba na ngwa ngwa ka umuaka UAE na-aru oru ma na-emechi ya.
N'ebe a, a manyere m ka m kọọrọ onye ọkwọ ụgbọala taxi nke si Pakistan na Abu Dhabi, bụ onye kwuru na osisi na greenbelt n'okporo ụzọ mgbe anyị na-agba ịnyịnya, na anyị ji aka anyị kụọ ha na Ramadan ngwa ngwa. Enwere m obi ike nke onye ahụ kpebiri ịhapụ ezinụlọ ma rụọ ọrụ bara uru na mgbanwe UAE nke ọ dị ugbu a. M laghachiri mgbe ọnwa 2 gasịrị. Ọ bụ ezie na m na-agbanyeghachi tiketi m laghachiri ugboro abụọ na-enwe olileanya inweta ihe dị mma ma ọ bụ n'efu. Mgbe m lọtara, anaghị m enwe nkụda mmụọ ọ bụla onye jụrụ m banyere UAE na m kweere mgbe nile na ọ bụ ihe mgbaru ọsọ m ma ghara ịbụ onye ọ bụla. E kwesiri ka onye obula gbaa ume ka o wepuo ndu ha. Naanị m gwara ha na oge ezumike adịghị mma maka ịchụ nta ọrụ. Ya mere chezie ya site na Oketto ruo March.
Mgbe m laghachiri, UAE dị nnọọ mma iji nye m onyinye nke ịkwanyere ùgwù na mmesapụ aka ọzọ n'ụdị ndị ọrụ mbata na ọpụpụ na-eme ka m gafee, n'agbanyeghị ụbọchị ikpeazụ nke visa validity. Ha weghaara oge maka nkwenye ma ha kwere ka m si na mba ahụ pụọ n'ebube.
Mgbe afọ 11 chere na ọ ga-aka mma ka m nọrọ ma ọ kachasị mma maka ịlaghachi. Amalitere m ịhụ ndụ na nghọta doro anya karị. Emere m ọtụtụ mgbanwe onwe onye na mgbanwe dị iche iche ná ndụ m mgbe m laghachiri. Amaara m na apụghị m ekpuchi ọnwa 2 jupụtara njem njem na gburugburu 5000 okwu ma ka edere m ihe m chetara. Edere m akwụkwọ niile ka m bụrụ akụkụ nke akụkọ ntolite. N'afọ ndị na-abịanụ, a ga-edegharị akụkọ a echefuru ọzọ. Ekwenyesiri m ike na a ga-agụ akụkọ m dị ka nkwurịta okwu na nkuzi. Site na nke a, a ga-echeta m ọbụlagodi mgbe m ga-anọkwaghị. Ihe odide m nwere ike ime ka m ọkọ akụkọ ihe mere eme nke hụrụ UAE dị iche.
Daalụ, UAE a ga-echeta gị mgbe niile dịka onye nkụzi na onye nkuzi. Ka ị na-eto eto mgbe nile ma na-eme ka ndị mmadụ nụ nrọ.
Njem nke oru acho acho 2 ya na Antony Raj Jayamani. Ọ jisiri ike lekwasị anya n'ịchọ ọrụ ma nwee ike inweta ọrụ n'otu ọrụ ahụ.